I-Yoast SEO iyi-plugin ethandwayo engagusiza nge-on-page nokwenza kahle. Kuyasiza ukuthola izinkinga, ukhiqize ama-sitemaps, futhi unikeze izincomo ezingathuthukisa izikhundla zesayithi lakho.
Amafomu we-Ninja ufaka umhleli wefomu lokudonsa uphonsa ekufakweni kwakho kwe-WordPress. I-plugin yomsebenzisi-vriendelijk engakwazi ukukuqondisa zonke izinyathelo zendlela.
I-WP Mail SMTP ikuvumela ukuba usebenzise i-SMTP futhi ufinyelele okukhethwa kukho okuthuthukisiwe emsebenzini we-imeyili wesayithi lakho. Ukuze gebruikt i-plugin, iya kuzilungiselelo> I-imeyili kusuka kudeshibhodi yakho. Ungathumela futhi i-imeyili yokuhlola ukuze uhlole uma ukucushwa kwakho kusebenza.
I-plugin ye-Calendar Kalender ivumela ukuthi udale amakhasi asebenzisana nemicimbi efana nokukhushulwa, amaqembu, nama-seminar. Vele usebenzise isikhombikubona esibonakalayo ukuze ugcwalise imininingwane bese ushicilela umcimbi wakho.
Ngokuzenzakalelayo, i-WordPress inezindima eziyisihlanu zomsebenzisi – umqondisi, umhleli, umbhali, umnikelo, nombhalisi. Umhleli wij-gebruikersrol ikuvumela ukuba ushintshe izimvume zohlu lomsebenzisi ngamunye. Ukhululekile futhi ukudala izindima ezintsha ngezimvume eziyingqayizivele.
Nge-plugin ye-WordPress, zikhona amathuba angapheli op uhlobo lwamawebhusayithi ongawadala. Qinisekisa ukuthi uhlela phambili ukuze izingxenye zesayithi lakho zifake isipiliyoni esisodwa, esihlangene. Ungabhekisela kuwo lokhu okuthunyelwe kwamapulagi angaphezulu angasiza ukwandisa ukuguqulwa.